Indraim-bava : raikitra ihany | NewsMada
Indraim-bava : raikitra ihany
Vita ihany ny fanadinana CEPE. Maro ny ankizy mpianatra sy ny ray aman-dreny no efa nanahy fa tsy ho tanteraka izy ity noho ny fitokonan’ny mpampianatra tetsy sy teroa. Nisy ihany ny fahatongavan-tsaina, teo amin’ny fotoana farany fa tsy tokony hatao takalon’aina ny mpanala fanadinana. Indrindra moa fa ireo sekoly tsy miankina nanohy tsy tapaka ny fampianarana.
Tsy hisy ny taona fotsy izay fanirian’ny mpanao politika very remby, entina hilazana fa mbola tsy milamina ny tany ka aleo aloha ahemotra ny fifidianana filoham-pirenena. Fa angaha moa tsy amin’ity taona 2018 ity no fotoana nomen’ny HVM ny mpanohitra saika hidina an-dalambe, tany aloha tany. Rehefa raikitra ny daty, tsy afa-manao izay tiany atao intsony ny mpitondra fa hiatrika ny latsa-bato ihany.
Nisy ny mpianatra sy mpampianatra naniry ny hanemorana ny CEPE fa rehefa hentitra ny fanjakana, tsy maintsy nirosoana ny fanadinana. Tontosa ny fanadinana fa ireo ray aman-dreny manomboka eto efa tsy maintsy hitady sahady ny vola ho enti- manana ny fidirana manaraka. Na mbola lavitra aza ny volana novambra hidiran’ny taom-pianarana vaovao, homanina tsikelikely ny fitaovana sy ny vola rehetra hefaina mialoha ny fidirana. Tsy afa-bela mihitsy ny ray aman-dreny fa nifarana ny taom-pianarana 2017-2018, saingy ny vaovao, banjinina sahady.
Ny sekoly manaraka ny rafitra frantsay efa hiditra atsy ho atsy. Ny Malagasy maro mbola hiatrika fanadinana ao anaty fampielezan-kevitra. Izay nahavita fanadinana sy niakatra kilasy, miditra amin’ny fialan-tsasatra nefa tsy afaka handeha lavitra any amoron-dranomasina akory ny ankamaroany mba hitsinjovana ny fiatrehana ny fidirana.